जित सुनिश्चित छ– केसी « Anumodan National Daily
जित सुनिश्चित छ– केसी
प्रकाशित मिति : ११ असार २०७४, आईतवार १५:२५
२०३३ सालमा जन्मिनु भएकी कमला केसी नेकपा एमालेका तर्फबाट टीकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुखको उम्मेदवार रहेकी छिन् ।
२०४७ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय केसीले एमालेको टिकापुर नगर कमिटी सदस्य, अनेमसंघ टिकापुर नगर कमिटीे अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन् गरिसकेकी छिन् । प्रस्तुत छ उनीसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
सानैदेखि म राजनीतिमा सक्रिय भएकोले २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा महिलालाई पनि प्रमुख पदमा सविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । महिलाको अधिकार स्थापित गराउन मेरो उम्मेदवार हुने छ । त्यस्तै, टीकापुरलाई समृद्ध र सद्भावको शहरको रुपमा विकास गर्न म उम्मेदवार भएकी छु ।
– तपाई प्रतिस्पर्धीमाभन्दा कसरी बलियो हुनुहुन्छ ?
मेरो लिगेसी नै कम्युनिष्ट हो । म प्यूठानमा जन्मिए टीकापुरमा राजनीतिक गर्ने एउटा राजनीतिककर्मी हु । यहा“का राजनीतिक परिवर्तनमा सक्रिय भएर अग्रिम भूमिकामा रहेको छु । अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा म राजनीतिककर्मी भएकोले मलाई टिकापुरबासीले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा पूर्ण आशामा छु ।
– तपाईलाई जनताले किन भोट दिने ?
एमालेले २०५४ सालको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा अत्यधिक मतसहित जितेको थियो । टीकापुरको विकासका लागि एमालेले धेरै नै काम गरेको छ । टिकापुरका विकास निर्माणका लागि घोषणा त्र सार्वजनिक गरेका छौ । हामीले पाच वर्षे योजना प्रस्तुत गरेका छौं । म महिलाका हरेक दुःखसुखमा साथ दिदै आएकोले जनताले मलाई मत दिनहुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रियवाद मुद्दा, एकता, सार्वभौमसत्ताका जस्ता विदेशीसामु नझुक्ने कुराले पनि हाम्रो पार्टीलाई भोट दिन्छन् ।
– तपाईका योजना के छन त ?
टीकापुरमा करिव ४२ प्रतिशत थारु समुदायको बसोबास छ । पहिलो योजना यहाँ सद्भाव कायम राख्ने हो । सद्भावसहितको समृद्ध टीकापुर निर्माण गर्ने मेरो मुख्य योजना हो । त्यस्तै, हामी टीकापुरलाई आधुनिक शहर बनाउछौं । खड्गवहादुर सिंहले बनाएको टीकापुरलाई समृद्ध आधुनिक शहर बनाउछौं । सबै वडालाई चक्रपथ, खक्रौला नाकालाई प्रदेश ६ र ७ को मुख्य नाका बनाउने, मुक्त कमैया, बाढीपीडित, सुकुम्वासीलाई जनता आवास कार्यक्रमबाट घरआवासको व्यवस्था गर्दै टीकापुरमै रोजगारीको व्यवस्था, महिला वालवालिका, अपाङमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने, महिला हिंसा मुक्त शहर बनाउने योजना छ ।
त्यस्तै मुक्तकमैया, बाढीपिडित, सुकुम्बासीलाई विशेष व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसैगरी एकीकृत सम्पत्ति करको समायोजन, ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्रमणको व्यवस्था, टीकापुरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पार्कको विस्तार, डल्फिन संरक्षण योजना, टीकापुर भ्रमण वर्षको व्यवस्था, विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी संचालनमा ल्याउने, राजी, वादी, दलित, थारु, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृति दिने, कृषि प्रवद्र्धन गर्न विउविजन सुपथ पसल भूउपयोग नीति बनाई कृषि योग्य भूमि सुरक्षित गर्ने, भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने मेरा योजना छन । संसारका समृद्ध शहरसंग भगिनी सम्वन्ध कायम गने, हरेक वडामा फ्रि वाईपाई जोन, सूचना प्रविधिको अध्यापन, नेपालीी र थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, निजी गैरसरकारी क्षेत्रसंग साझेदारी रहनेछ ।
– महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ ?
म चुनाव प्रचारप्रसारको क्रममा धेरै ठाउ घुमे । जहा पनि महिलाका समस्या मात्र सुन्ने गरेको छु । उनीहरुको कुरा सुनेर मेरो मन कुडिएको छ । म ती महिला दिदि बहिनीको घाउमा मलम लगाउने छु । म महिलाका पक्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने छु । महिला हिंसामुक्त नगर बनाउन पहल गर्नेछु । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने छु । असहाय बालबालिकाको शिक्षा र स्याहारका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था, नगरभित्रका सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयहरुलाई महिलामैत्री बनाइने नितिमा ल्याइने छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजि प्रतिष्ठानमा अनिवार्य बाल स्याहार केन्द्र बनाउने निति लिइने उल्लेख गरिएको छ ।
– २०७२ भदौको घटनाको अहिले पनि असर छ । कसरी चिर्नु हुन्छ ?
भदौमा भएको घटना अत्यन्तै दुखद हो । अव पहिलेको घटना कोट्याउन आवश्यक छैन । हामी सवै नेपाली भएकोले थारु पहाडीया मिलेर नै टीकापुरको विकास गर्ने भएकोले अव त्यतिवेला विग्रिएको सम्बन्धलाई सुधान गर्नुपर्दछ । यहाँको सामाजिक सद्भाव विर्गानका लागि थारु र पहाडिबीच सदियौदेखिको सम्बन्ध विर्गानका लागि बाहिर तत्व आएर टिकापुर घटना गराएका हुन् । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पनि मैले थारु र पहाडीसंगै प्रचारमा रहेको पाए । त्यसले सम्बन्ध सुध्रिएको मैले पाए । टीकापुरलाई सामाजिक सद्भावको शहरको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ ।